Gabadhan dhowr iyo toban jirka ah inta jeer ee la guursaday tiro ma laha - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalGabadhan dhowr iyo toban jirka ah inta jeer ee la guursaday tiro ma laha
October 17, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somaliland, Wararka Maanta 0
Rusul waxay soo kacday iyadoo kaligeed ah. Seygeedii cusbaa wuu baxay. Guurkeedana wuxuu ku ekaa saddex saacadood oo kaliya.
Kaasi ma ahayn arooskii ugu horreeyay ee ay gashay gabadhan dhowr iyo toban jirka ah. Ma ahayn keedii labaad, saddexaad ama xitaa afaraad. Run ahaantii inta jeer ee la guursaday maba tirin karto siday u badnaayeen awgeed.
Nolosha xanuunka badan ee Rusul waxay kasoo billaabatay nin ugu tagay goob ay ka shaqeyneysay.
Arrintan oo dhan intii aysan billaabanin waxy arki jirtay gabdho sideeda oo kale u da’ yar oo maalin kasta iyagoo dharka arooska xidhan uu gacanta ka qabsanayo nin hanti heysa oo aad uga weyn.
“Waxay ahaayeen gabdho qurux badan, anigu ma fahmi jirin sababta ay gabar walba isu iibineyso,” ayey tidhi.
Iyada lafteeda sidaasoo kale inay ku dhacdo ayey halis ugu jirtay – qoyskeeda way kasoo fogeyd, waxayna caawineysay walaasheed oo lagu magacaabo Rula.
Laakiin iyadoo nolosha sidaas u adag ku jirta xitaa, waxay ballan uga qaadday nafteeda inaysan waligeed isu dhiibi doonin nin nolosheeda gacanta ku qabta.
Mar kasta oo ay rag damcaan inay bartaan ama telefoon lambarkooda siiyaan, way iska indho tiri jirtay.
Maalin maalmaha ka mid ah, nin ayaa ugu yimid goobteeda shaqada, wuxuuna billaabay inuu la sheekeysto Rusul. Waxay uga warrantay nolosheedii hore, sababta ay u shaqeyneyso halkii ay iskuul ka dhigan lahayd iyo magaalada ay kasoo jeeddo. Waxay dareentay inuu yahay nin wanaaggeeda jecel.
Noloshii ayaa kusii adkaatay Rusul. Iyadoo ku nool Magaalada caasimadda ah ee Baqdaad kuma uusan filneyn mushaarkeeda.
Inkastoo ay horay wacad ugu martay inay wax walba ka madax bannaanaan doonto, haddana waxay billowday inay ka fikirto sidii ay xaas u noqon lahayd – oo ay u heli lahayd nin daryeela iyada iyo walaasheedba.
Ninkii sidii ayuu ugu tagi jiray goobta shaqada, maalin kastana wuxuu sameyn jiray waxyaabo uu kusoo jiito. Rusul si tartiib tartiib ah ayey ugu qaadday dareen jacayl.
Dhowr isbuuc uun kaddib, wuxuu usoo bandhigay guur. Wuxuu u kaxeeyay xaafadda Kadhimiya ee ku taalla magaalada Baqdaad.
Markii ay kusii socdeen goobta la isku mehersado, Rusul waxay dareemeysay farxad aad u ballaadhan.
Nin dilay Hooyadiis oo lagu toogtay Magaalada Boosaaso.